Brody PR: Goormaad DABAYSAA Xiriirkaaga Dadweynaha | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 19, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Maanta, oo ay weheliyaan dhowr boqol oo kale oo wax ku qora bogagga internetka, saxafiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha, waxaan ka helay email aan la weydiisanin Bet Brody (beth@brodypr.com) oo ay kujirto war-saxaafadeed ku saabsan Jump Start Media Media Daabacaadda E-Buug Cusub oo ku saabsan Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada ee Ganacsiyada Yaryar.
Ma xumeyn in ay ahayd SPAM, waxay sidoo kale si furan u siisay liiska dadka qaata magaca qof kasta oo kale iyo cinwaanka iimaylka. Weligaa maqal BCC?
Ma aqaan Bey oo ma aqaan Brody PR, laakiin waxaan u sheegayaa inay ogaadaan, iyo sidoo kale dhammaan himilooyinkooda iyo macaamiishooda, inay uqalmayaan diidmada weyn ee ay hadda helayaan. Hal jawaab (dhammaantood uga jawaab) cinwaanka emaylka weyn (oo sii socda) oo ka socda shirkad caan ah oo caan ah ayaa akhrinaysa:
Iga kaxee liiskan f —g ah oo aanan weligay codsan inaan ahaado oo aan ka bixi karin.
Liiska dadka ay u baxday ayaa ah yaa waaye saamileyaasha. Intii aan kufaanaa in aan sameeyay ka Liiska, sidoo kale waan ka xumahay in shirkad Xiriirka Dadweynaha ay soo uruurin doonto liis sidan oo kale ah si ay noogu soo dirto. Waan hubaa in Jump Start Social Media E-Book uu aad u wanaagsan yahay e-buugga I laakiin ma doonayo inaan kala soo dego, ku xidho, ama aan kugula taliyo maxaa yeelay waxaa ku faafiyay shirkadooda PR.
Shirkadaha Xiriirka Dadweynaha, in ka badan qof kasta oo kale oo ka tirsan warshadaha, waa inay aqoonsadaan saameynta emayllada aan la weydiisan karin iyo muhiimadda ay leedahay isgaarsiinta ogolaanshaha ku saleysan ee dunidan spam. Waxaan ku hayaa foom xiriir ah oo ku saabsan degelkeyga si dadku ay khadka iiga ridi karaan - taasi waa hab fiican oo shirkadda PR ay iigu xirmi karto… ama iyada oo loo marayo 80-ka kale ee bulshada ee aan ku wada xiriiro Tani waxay ahayd mid fudud caajis PR, saafi ah oo fudud.
Hada cinwaankayga e-mayl wuxuu ku jiraa gacanta ilaahay-ogyahay-yaa sababtoo ah hal hay'ad PR waxay ilawday dhamaan sharciyadii Xiriirka Dadweynaha. Nooc ahaan, waxaan hadda u daabacay cinwaankooda emaylka adduunka oo dhan inay arkaan. Xor ayaad u tahay inaad hoos u dhigto qoraalka Bet markii aad leedahay dalacsiintaada soo socota - Waan hubaa inay jeclaan doonaan!
Brody ayaa sidoo kale lagu dari doonaa liiska dheer ee Khayaanada PR by Gina trapani. Waxay iga dhigeysaa runtii inaan la yaabanahay haddii Brody laga yaabo inuu wajahayo dacwad ficil ah oo ku saabsan ku xadgudubka sharciga CAN-SPAM maaddaama aysan macnaheedu ahayn in laga baxo isgaarsiinta ballaaran.
Marka xigta ee aad kireysato shirkad PR ah, waxaad ogaataa sida ay suuqa uga heli doonaan saamileyaal iyo sida ay ugu dhowaanayaan. Hadday tahay sida Brody PR, ha u qorin. Ma helaan. Haddii aad leedahay shirkad sida Brody PR oo ah kuwa waxyeelleeya saamaynta, shaqada ka cayri. Waxay sameyn doonaan waxyeello ka badan tan u wanaagsan astaantaada.
Akhris Dheeraad ah: Sidee hal emayl u dilay shirkad PR ah, Waan qaddarin lahaa raaligelinta, Xiriirkii Dadweynaha oo Fashilmay: Cashar iyo hadaaq… Waan hubaa inay soo socdaan more
Cusboonaysiinta: 8/21/2009 Waxaa laga soo qaatay 'Bet Brody' aad u wanaagsan maanta oo raaligelin laga bixinayo snafu, Bet wuxuu leeyahay maqaal 'casharro laga bartay' dhowaan soo socda.
WARBIXIN MUHIIM AH: 10/19/2009 Waxaan dib uga soo ceshanay qoraal ka yimid Brody PR kale oo aan ku qaldannay xiriiriyadeenna Post-keena! Waxaan si kal iyo laab ah uga cudurdaaraneynaa xiriirkiina waa la cusbooneysiiyey
Tags: NalasooXayeysiiska Appkernsawirada
Agoosto 20, 2009 saacaddu markay ahayd 12:17 PM
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan Brody PR ayaa ah markii aan riixay degelkooda, waxa ugu horreeya ee aan arko wuxuu ahaa sawirka madaxooda oo si sharaf leh ugu dhawaaqaya "Hay'ad damiir leh…"
Haddii taasi Birtu tahay, markaa garan maayo waxa uu yahay.
Agoosto 20, 2009 saacaddu markay ahayd 1:17 PM
Doug - dadka sameeya waxyaalahan oo kale waxay leeyihiin dareen aan la rumaysan karin oo ahmiyad gaar ah u leh. Fiiri liistada macmiilkeeda; miyaadan la dhicin In kasta oo aadan dooran, waxa ay tahay inay kuu sheegto ayaa had iyo jeer aad muhiim u ah, sidaa darteed aad ayey u fiican tahay inay hubto inaad ku qanacsan tahay inay kugu soo dhoweysay joogitaanka emaylkeeda.
Idinka wiilasha warbaahinta bulshada ma heshaan marka ay timaaddo kuwa runta muhiimka ah.
Agoosto 20, 2009 saacaddu markay ahayd 1:42 PM
Waad ku mahadsantahay dhajinta tan, Doug. Iyagu waa xiriir dadweyne, ka dib waxaa jira xiriirro warbaahineed, ka dibna WAA IN AY noqdaan xiriirka warbaahinta bulshada (dalladda ay tahay in kuwa wax galaya ay hoos yimaadaan). Isku darka seddexdan hal erey waa guuldaro isdaba joog ah oo ka jirta warshadaha oo dhan, waana cadeyn wanaagsan in shirkadaha badankood aysan helin.
Agoosto 20, 2009 saacaddu markay ahayd 2:38 PM
Xaqiiqdii u jilci habka aad u dhacday ee aad u maleysay inaad saameyn ku laheyd isla safka koowaad
Agoosto 20, 2009 saacaddu markay ahayd 5:59 PM
Brody PR # fashilmay
Agoosto 20, 2009 saacaddu markay ahayd 6:15 PM
wow - haa tani waa f-up weyn laakiin tan mooyee qalad soo noqnoqda oo dhankooda ah waa inaad runti siisaa shakiga. Dadku waxay leeyihiin maalmo xun qaladaadna mararka qaarkood. Kawaran haddii qof uu kuugu yeedho madaxaaga oo uu kaa qaado dad raxan raxan ah markasta oo aad khalad ka gasho inta lagu jiro maalinta? Boostadani waxay noqon laheyd mid la taaban karo iyadoon si cad looga qoslin wakaalada iyo xayeysiiyaha su'aasha laga qabo. Sida iska cad, waa inaad adigu maalin xun naftaada la noqotaa inaad noqotid qof xanaaq badan oo dagaalyahan ah.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 2:56 PM
Kuma raacsani. Xaqiiqdii, waxaan u maleynayaa in qoraalkani uu ahaa mid aan habooneyn. Xaqiiqdi haweeneydu wey taqaanaa BCC. Qalad bay gashay. Khadka CC iyo BCC ayaa milimitir u jira midba midka kale.
Waxaad qiraysaa inaadan aqoonin Bet Brody ama Brody PR. Waxyaalihii aad ku tiri qoraalkan miyaad ku odhan lahayd wejigeeda. Miyaad u sheegi lahayd macmiilkeeda horteeda inay ka eryaan maxaa yeelay waxay ku qaldantay inaadan dadka dhigin khadka BCC? Kuma garanayo adiga, markaa ma aqaan jawaabta su'aashaas, laakiin waxaan xiisaynayaa inaan ogaado.
Tani waa FAR ka spam xun. Miyaadan helin spam dhab ah?
Haweenaydan ayaa qalad daacad ah gashay jawaabtuna waxay ahayd mid aan gabi ahaanba munaasib ahayn. Qof kasta oo kajawaabay, oo ay kujirto xigashada aad isticmaashay, OGOOW waxay sameynayeen. Iyagu waxay ahaayeen kuwa cidwalba oo kale udirdareeya, iyagoo og. Waana hubaa in tani aysan ahayn markii ugu horreysay ee ay tan oo kale dhacdo. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku ogaado fikirkaaga maqaal aan ka qoray gabalka:
Baraha bulshada "gurus" iyo dadka wax qora ee wax qora waa kuwo si iskood ah u hadlaya
Sidoo kale, haddii aad rabto sheeko dhab ah oo ku fashilantay PR, akhri tan. Waa laba qaybood oo uu macmiilku ku yimaado isaga oo gebi ahaanba gebi ahaanba u dhaqaaqa dhamaadka.
Haye PR, baloogleydu maaha qalab loo isticmaalo
UPDATE: Sheeko waayo-aragnimo xun oo PR ah. Macmiilka shirkadda 'PR firm' wuu qummanaan yahay.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 4:59 PM
1. Maan bilaabin taxanahan foosha xun ee dhacdooyinka, dspark. Waa inaan ka falceliyo.
2. Kani waa shirkad XIDHIIDHKA DADWEYNAHA. Tani waa SHAQOODO iyo, sida loo malaynayo, khibradooda. waxay la mid tahay weydiinta haddii bukaan lugtiisa si shil ah looga jaray uusan u xanaaqin Dhakhtarka.
3. Waxay ahayd e-mayl ganacsi oo aan la dalban oo leh MAYA ka bixid.
4. Waxay si qarsoodi ah u dhisteen liiskan cinwaannada emaylka iyagoon kuwa helaya ogeyn.
Tani ma ahayn qalad daacad ah - waxay ku qaadatay bilooyin in la isku daro liiskan waxayna leeyihiin macaamiishooda BIXINTA adeeggan. Taasi run ma ahan, waa wax iska soo horjeeda - shar iyo khiyaano labadaba.
Agoosto 22, 2009 saacaddu markay ahayd 11:44 PM
Waa inay si culus kuugu cuslaataa inaadan waligaa qalad sameyn, Douglas. Waxaan kugu amaanayaa taas, inaad noqoto mid aan khaldami karin oo aan waligaa khalad ka gelin PR.
Waxaan kula jiraa David tan. Dusha sare oo aan loo baahnayn, laakiin waa inaad dareentay baahida loo qabo in laga sii dheeraado qoraallada kale.
Agoosto 23, 2009 saacaddu markay ahayd 4:46 PM
Marnaba ma dhihin qalad ma sameyn. Markii aan qalad sameeyay, waxaan la kulmay raadadka. Haddii aynaan saameyn ku yeelan lahayn, ma ogaan lahayn inay khalad ahayd, miyaanay ahayn? Waxaan la xiriirayaa Ms. Brody, waxaan u diray ebookgayga ku saabsan Blogging Business, waxaanan u soo bandhigay inaan ka caawiyo sidii ay ugu adkeysan lahayd wax kasta oo ay u baahan tahay.
Dabcan waad sameysay. Dhamaan sadaqad la'aan.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 9:20 PM
Ma aqaano Doug, laakiin waxaan si toos ah ugu odhan lahaa Ms. Brody haddii aan fursad u heli lahaa.
Waxaan u maleynayaa inay dhab ahaan ka xun tahay spam dhaqameedka. Shirkadaha Xiriirka Dadweynaha maahan xayeysiiyayaal. Waxay u maleynayaan inay yihiin khabiiro isgaarsiineed oo garanaya nooca fariimaha ee ka farxin doona dhagaystayaasha iyo xeeladaha ka xanaajin doona Haddii qof uun ogaado inuu hubiyo in farriintu si sax ah u dhacdo, waa shirkad PR ah.
Agoosto 23, 2009 saacaddu markay ahayd 4:47 PM
Waxaan helay fursad. Beth Brody ayaa ila soo xiriirtay emayl waxayna waydiisatay ogolaanshahayga in aan ku soo qoro balooggeyga barteeda cusub, Casharrada la Bartay. Oo waxaan codsaday raaligelin rasmi ah - waana helay. Waxaan u maleynayaa in Ms. Brody ay ka soo kabsan doonto tan… shaki kuma jiro.
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 7:55 PM
Waxaan u maleynayay in qofna uusan ogeyn waxa loo yaqaan 'BCC'. Waan badalay maskaxdayda.Waxaan helayaa wararka iyo PR-ka oo maalin walba soo baxa oo leh (mararka qaar) Boqollaal cinwaanno e-mayl ah oo ku yaal TO: garoonka (had iyo jeer magacyada iyo emayllada qof kasta oo warbaahin ah oo ku yaal gobolka Indiana idaacadda. in TV-ga loo daabaco, badankood waxaan hubaa inaysan rabin in cinwaankooda e-mailka si guud loo mariyo, iyadoo aan la xusin inaan aaminsanahay inay tani jabineyso sharciga federaalka, miyaanay ahayn?).
Waxaan u maleynayaa inay tahay ujeedo iyo ula kac ah dadaalka loogu jiro in la ogeysiiyo dadka qaata inay WHO ka hesho e-mailka. Marka hore, waxay sare u qaadeysaa isu-diraha ahmiyadda ay u leedahay iyadoo u muujineysa dhagaystayaal aad u tiro badan cabirka la sheegayo ee saameyntooda. Sidoo kale marka sidan la yeelo, waxay yareysaa xoogaa khiyaano ah (ama malaha MA sidaa ufudud ah) culeys kan qaataha ah inuu isticmaalo maaddada. Si kastaba ha noqotee, haddii dhammaan kuwan wax saameyn ku leh ay heleen maaddada oo laga yaabo inay isticmaalayaan, miyaanan ahayn inaan sidoo kale isticmaalo?
Qeybta ugu hooseysaana waa tan: waxay hubaal ku heshay IN AAD ka hadasho arrintaas, miyaanay ahayn? Ma la yaabban tahay imisa qof ayaa akhriya bartaada oo gujinaya xiriiriyeyaasha la bixiyay? Muxuu Yiri Siyaasiga Hadalkiisii ​​Hore? Xayeysiinta xun ayaa ka wanaagsan midna haba yaraatee - magacayga saxda ah u qor. Waxaad qaadatay sed, xarig jillaab iyo quusin. Dareenkaasna, waxay qabatay shaqadeeda RUNTA WELL.
Agoosto 24, 2009 saacaddu markay ahayd 12:46 PM
Taasi waa mid xiiso leh take laakiin waxaan ka hadlaynaa Brody, maahan macaamilka. Taasi dhibaato ayey noqon kartaa!
Agoosto 21, 2009 saacaddu markay ahayd 9:12 PM
Jawaabteena tan waxay tahay: http://www.slaughterdevelopment.com/2009/08/19/th...
Agoosto 25, 2009 saacaddu markay ahayd 8:39 PM
Ku guuldaraysiga BCC waa dhacdo ATD oo daran, laakiin PR waa inaad u dirtaa war-saxaafadeed xiriirada warbaahinta si guud - waa sida kaliya ee aad ugu heli karto qof kasta oo khuseeya inta ay wali tahay wararka. Waan fahansanahay caradaada ku saabsan in cinwaanka emailkaaga la shaaciyo - waadna saxsan tahay inaad sidan dareento - laakiin, sida blogger ahaan, miyaadan ka jeclaan lahayn inaad ka ogaato sheekooyinka wararka markay dhacaan, oo ay cusub yihiin oo cusub yihiin, halkii aad ka sugi lahayd la weydiiyaa?
Ma aqaano sida ay tahay gobolada, laakiin halkan England saxafiyiinta waxay iska qoraan keydka macluumaadka warbaahinta si gaar ah si loogu diro alaabo iyaga khuseeya iyaga oo haddii kale aysan wax lug ah ku laheen. Maxaa ka khaldan taas?
Agoosto 25, 2009 saacaddu markay ahayd 8:45 PM
Waxaa intaa dheer, tani waxay noqon kartaa xoogaa xisaab xisaabeed dhalinyaro ah, qof hadda bilaabay PR, oo qalad sameeyay. Gabi ahaanba waad baabiisay iyada. Maxaad sida xun u noqonaysaa? Ugu yaraan qaladkeedu wuxuu ahaa mid aan dambi lahayn.
Uma baahna inay bilooyin ku qaadatay soo uruurinta liiska - waxaad aadi kartaa Media Atlas, Vocus, Cision ama tiro kale oo keydadka warbaahinta ah oo aad soo jiidan karto liiska saxafiyiinta, boggaga internetka, tifaftirayaasha, soo saarayaasha… waxkastoo jira. Waxaan u direy warsaxaafadeed 227 qof shalay, maanta waxaan wacayey dhamaantood si aan u arko inay doonayaan inay adeegsadaan iyo in kale. Waxaan hayaa culeysyo wareysiyo iyo daboolis ah macmiilkeyga. Taasi ma khalad baa? Maya. Waa uun sida ay wax u shaqeeyaan - way ogyihiin, waan ogahay, cidna kama oydaan.
Agoosto 25, 2009 saacaddu markay ahayd 9:54 PM
PRMira, Wixii ay qabteen, iyo waxaad sameyneyso, waa sharci darro gudaha Mareykanka. Waa inaad keentaa farsamo ka bixitaan, haddii kale waxaad ku xad gudubtay sharciga CAN-SPAM. Ma ogtahay inaad qatar galinayso shirkadaada? Gali opt-n ​​bartaada oo ururi cinwaannada emaylka sida ugu habboon - oo leh ogolaanshaha dadka.
Khatar kuma galinaayo shirkaddeyda, maxaa yeelay saxafiyiinta waxay qadariyaan in la ii soo diro macluumaad iyaga khuseeya oo la socda. Sidan ayaa PR u shaqaysaa dadka badidooduna way ku faraxsan yihiin dejinta, dadka hela war-saxaafadeedyada ayaa lagu daray. Mararka qaar waxaad u diri kartaa qof aysan quseyn, ka dib wey kuu sheegi doonaan, waad raali gelinaysaa cidna wax kama qorto baloog xun.
Sida iska cad anigu kama aqaano shuruucda ka jirta Gobollada, laakiin sida Vocus, Cision, iwm, waxay u shaqeeyaan adduunka (waxaan u maleynayaa inay noqon karaan shirkado Mareykan ah), ma qiyaasi karo inay aad uga duwan tahay. Runtii waxaan u maleynayaa inaad duufaan ku abuureyso baraha wax lagu baro. Maaha sida ay kuugu soo dirtay emayl ku saabsan kiniiniyada ballaarinta xubinta taranka ama weydiisashada faahfaahinta bangigaaga - tani waxay ahayd gabal dhab ah oo PR ah, taas oo, la oggol yahay, inay xoogaa yareysay iyada oo ku fashilantay BCC, laakiin taasi waa inta ay le'eg tahay. Looma baahna falcelintaada xad dhaafka ah.
Agoosto 28, 2009 saacaddu markay ahayd 2:30 PM
Agoosto 28, 2009 saacaddu markay ahayd 11:09 PM
"Tani waa sida ay u shaqeyso" run maahan run. Waxaan xiriir la leeyahay shirkado badan oo PR ah kumana ururaan cinwaanada emayllada saamileyaasha suuqa iyagoon fasax ka haysan iyaga ka dibna iyaga oo SPAM ah. Waxaan kugula talin lahaa inaad dib uga fikirto xeeladahaaga. Waxaa laga yaabaa inaad u heleyso natiijooyin macaamiishaada, laakiin AQOONSIGA si aad natiijo fiican uga hesho adoo dhisaya xiriirro ogolaansho ku saleysan ayaa aad u weyn.
Waxaan kugula talin lahaa inaad sidoo kale akhrido sharciyada Boqortooyada Midowday ee SPAM, "Shirkadaha wali waa loo wajihi karaa 'qabow' oo leh barxado emayl laakiin xilliyadaas e-maylku waa inay lahaadaan qodob ka bixitaan ah."